ဇာတ်ကား ထဲမှာ သုံးဖို့ ငှားလိုက်တဲ့ ပြိုင်ကား ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ – WunYan
ဇာတ်ကား ထဲမှာ သုံးဖို့ ငှားလိုက်တဲ့ ပြိုင်ကား ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ
မန္တလေးမှာ ညီကို ၂ ယောက်ကို ပြိုင်ကားနဲ့ တိုက်သွားတဲ့ တရားခံဟာ ဒီပြိုင်ကားပေါ်က ကောင်ပါ..သူ့ကားမဟုတ်ပါ.. မြင့်မြတ်နဲ့ ပက်ထရက်ရှာတို့ ဇာတ်ကား ဇာတ်ဝင်ခန်းတွက် ငှါးထားတဲ့ ပြိုင်ကားကို… ဒီကောင်က မောင်းတာပါ။
ကားကို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွက် ခနသုံးပြီး မြင့်မြင့်တို့က ပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ဒီကောင်က ပိုင်ရှင်ဆီ တန်းပြန်မပို့ပဲ.. သူ့ကားလိုလို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး မူးရူး လျှောက်မောင်းလို့.. မသေသင့်ပဲ.. စည်းကမ်းရှိတဲ့ ညီကို ၂ ယောက် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ကောင်ကြောင့် သေခဲ့ရပြီဗျာ..
ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ Post ပါ
ရှုတင်မှာ ဒီကားပေါ်မှာ အကယ်ဒမီမြင့်မြတ် . . .
ကားတန်ဖိုးကတော့ သိန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ LEXUS အမိုးဖွင့် ပြိုင်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ် ကားပိုင်ရှင်ကတော့ ကြေကွဲနေပါတယ် မိမိပိုင် တန်ဖိုးကြီးမား ပစ္စည်းများကို ဘယ်လောက်ဘဲ ခင်မင်ရင်းနှီးပါစေ ငှားရမ်းခြင်း မပြုကြဖို့ သင်ခန်းစာပါ
လူအများစုဟာ… သူတပါးဆီမှ ငှားရမ်းသုံးစွဲကြလျှင် မိမိပစ္စည်းလို ဂရုမစိုက်ကြဘဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ် ပြသာနာတက်ပြီဆိုရင်လဲ တာဝန်မယူတတ် ကြပါဘူး မိတ်ဆွေတို့အး အားလုံး သင်ခန်းစာ ယူတတ်ကြပါစေ
ဇာတျကား ထဲမှာ သုံးဖို့ ငှားလိုကျတဲ့ ပွိုငျကား ပိုငျရှငျရဲ့ ရငျဖှငျ့စကားမြား
မန်တလေးမှာ ညီကို ၂ ယောကျကို ပွိုငျကားနဲ့ တိုကျသှားတဲ့ တရားခံဟာ ဒီပွိုငျကားပျေါက ကောငျပါ..သူ့ကားမဟုတျပါ.. မွငျ့မွတျနဲ့ ပကျထရကျရှာတို့ ဇာတျကား ဇာတျဝငျခနျးတှကျ ငှါးထားတဲ့ ပွိုငျကားကို… ဒီကောငျက မောငျးတာပါ။
ကားကို ဇာတျဝငျခနျးတှကျ ခနသုံးပွီး မွငျ့မွငျ့တို့က ပွနျပေးတဲ့အခြိနျမှာ ဒီကောငျက ပိုငျရှငျဆီ တနျးပွနျမပို့ပဲ.. သူ့ကားလိုလို ကွှားလုံးထုတျပွီး မူးရူး လြှောကျမောငျးလို့.. မသသေငျ့ပဲ.. စညျးကမျးရှိတဲ့ ညီကို ၂ ယောကျ စညျးမဲ့ကမျးမဲ့ ကောငျကွောငျ့ သခေဲ့ရပွီဗြာ..
ကားပိုငျရှငျရဲ့ Post ပါ
ရှုတငျမှာ ဒီကားပျေါမှာ အကယျဒမီမွငျ့မွတျ . . .
ကားတနျဖိုးကတော့ သိနျးပေါငျးမြားစှာ တနျဖိုးရှိတဲ့ LEXUS အမိုးဖှငျ့ ပွိုငျကားလေး ဖွဈပါတယျ ကားပိုငျရှငျကတော့ ကွကှေဲနပေါတယျ မိမိပိုငျ တနျဖိုးကွီးမား ပစ်စညျးမြားကို ဘယျလောကျဘဲ ခငျမငျရငျးနှီးပါစေ ငှားရမျးခွငျး မပွုကွဖို့ သငျခနျးစာပါ
လူအမြားစုဟာ… သူတပါးဆီမှ ငှားရမျးသုံးစှဲကွလြှငျ မိမိပစ်စညျးလို ဂရုမစိုကျကွဘဲ ဖွဈခငျြရာဖွဈဆိုပွီး အသုံးပွုတတျကွပါတယျ ပွသာနာတကျပွီဆိုရငျလဲ တာဝနျမယူတတျ ကွပါဘူး မိတျဆှတေို့အး အားလုံး သငျခနျးစာ ယူတတျကွပါစေ